Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye ee Degmada Tog-Wajaale oo si-wayn u soo dhaweeyey Muj Abiib | Somaliland.Org
Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye ee Degmada Tog-Wajaale oo si-wayn u soo dhaweeyey Muj Abiib
May 26, 2010	Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye ee Degmada Tog-Wajaale oo si-wayn u soo dhaweeyey Muj Abiib Diiriye Nuur (Tima-cad)
Tog-wajaale(TNN)-Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye ee Degmada Tog-wajaale ayaa galinkii d an be ee maanta (shalay) soo dhawayn qaran u sameeyey Muj-Abiib Diiriye Nuur (Tima-ca de) oo ka tirsan masuuliyiinta sar-sare ee Xisbiga Kulmiye .
Mujaahidka oo muddooyinkan danbe hawlo shaqo ugu maqnaa wadamada Yurubta, ayaa safar dhulka ah kaga soo galay magaalo xuduudeedka Tog-wajaale dhinaca Dalka Itoobiya oo uu ka soo dagay. Iyada oo kumanaan qof oo ka mid ah Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye ee Degmada Tog-wajaalena diyaar ugu sii ahaayeen soo dhawaynta Mujaahidka. Kuwaas oo badi dadway nihii halkaa iskugu yimidna ku labisnaayeen dhar laga tolay midabada Calanka Xisbiga Kulmiye, Calamaan, Dalladaha haweenka, Masaro iyaguna ka muuqato midabada Calanka Xisbiga iyo Ko ofiyado ay ku xardhan tahay Astaanta Xisbigu. Iyaga oo saacado badan u taagnaa soo dha waynta masuulka Jid-cadaha dhex mara badhtamaha magaalada ee u gudba dhinaca Xuduuda Dalka Itoobiya. Kuwaas oo bilowgii hore ee uu soo galayba socod kula soo wareegayey jidad ka dhex mara Magaalada ilaa ay ka gaadheen Xafiiska loogu tallo galay Garabka Haweenka ee Xisbiga Kulmiye ee Degmada Tog-wajaale oo isla maanta uu Mujaahidku furitaanka Xafiiska uu xadhiga kaga jaray.
Munaasibadan lagu soo dhawaynayey Mujaahid Abiib Diiriye Nuur ee qaban qaabadeeda ay wateen Masuuliyiinta Xisbiga Kulmiye iyo taageerayaasha Xisbiga ee Degmadaasi ayaa waxa iyaduna garab socotay abaabul ka dhan ah oo ay wateen Maamulka Degmada Tog-wajaale oo lagu doonayey in lagu carqaldeeyo soo dhawayntan lagu muujinayey cududa Xisbiga Kulmiye ku leeyahay Degmadan oo in dhawaale laga shaki qabay in wax iska badaleen. Taasi ayaa suu rtoobi wayday ka dib markii Maamulku arkay Awooda Taageerayaasha Kulmiye iyo Tiro yaraa nta Booliiska Degmada Jooga oo aan cabin Karin Iyada oo la arkayey dhaqdhaqaaq xoogan oo ay wadeen xalay(habeen hore) ilaa galinkii hore ee manta(shalay) Maamulka Dawlada ee ku sugan Degmadani.
Furitaankii Xafiiska Garabka Haweenka Xisbiga Kulmiye ee Tog-wajaale oo lala mataanaysiiyey soo dhawayntii Mujaahidka, laguna maamuusay in uu Xadhiga ka jaro Furitaanka Xafiiska ayaa ugu horrayn halkaa ka hadlay isaga oo mahad naq ballaadhan u jeediyey taageerayaasha Xis biga Kulmiye ee soo abaabulay soo dhawayntiisa, waxana uu halkaa ka soo jeediyey khudbad kooban oo u badnayd guubaabo iyo bishaarooyin is barkan, kuna boorinayey taageerayaasho oda hiilka iyo hooda la ag taagan yihiin Xisbigooda, uguna bishaareeyey in hadii Doorashadu si wacan inoogu dhacdo Aqoonsigiina fooda yahay, kuna dardaaray Dadwaynaha in ay nabada ilaashadaan . oo sida uu sheegay Mujaahidku ku eedeeyay Dawlada in manta laga baryayo Xu kuumada in ay iska daayaan iska hor keenka Dadka .
Intaa ka dib waxa halkaa ka hadashay Guddoomiye Ku Xigeenka Golaha Deegaanka Gabiley M arwo Khadra Xaaji Ismaaciil Yoonis oo iyadna sidoo kale ka soo jeedisay madashaasi hadalo u badan dardaaran ay ku waaninayso Taageerayaasha Xisbiga in ay iska ilaaliyaan Xukuumada oo wakhtigedii dhamaaday iyaga oo ku fashilmay muddadii ay soo hayeen Xilka umada oo sida ay sheegtay marwadu markii ay ku fashilantay masiirkii umada doonaysa in ay Lacag iyo Xoog ku sii fadhido, oo ay ku cimri dheeraystaan. Taasi oo ay ku sheegtay in Dadkeenu ka Ilbaxeen .
Waxa isaguna halkaa ka hadlay Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye ee Degmada Tog-wajaale Cumar Maxamed Xoodiye oo isaguna ku dheeraaday Muhiimada ay leedahay In Isbadal dhab ah la he lo oo taageeradan laxaadkaa lihi aanay soo doonan Aduun iyo Wax lacuno ee ay u haraadan yihiin wax qabad iyo Mustaqbal Ifaya oo uu ku tilmaamay in Xukuumadu Aastay Rajadii Shaca bka. Waxa kale oo uu Xukuumada ugu quus gooyey in Rabitaanka Dadwaynaha aan laga been sheegan Karin oo maantaba ay dhabi dhabteed timi.
Waxa kale oo iyaguna halkaa ka hadlay masuuliyiin ka tirsan Xafiiska Xisbiga Kulmiye ee Degm ada oo iyaguna sidoo kale u soo jeediyey guubaabo iyo wacyi galin.
Xafladahan isku dhafan ee Soo dhawaynta Masuulka iyo Furitaanka Xafiiska ayaanay ka soo qayb galin Guud ahaan Masuuliyiinta sar-sare ee Golaha Fulinta ee Xisbiga Kulmiye iyo kuwa Golaha dhexe ee Xisbiga kulmiye ee ka soo jeeda Gobolkan Gabiley taasi oo dadwaynaha reer Tog-wajaale si-wayn isku waydiinayaan sababta uu masuul kaliya ahi uga soo qayb gali waa yey marka laga reebo Guddomiyaha Xisbiga Kulmiye ee Gobolka Gabiley iyo Marwo Khadra Xa aji Ismaaciil Yoonis iyo Masuuliyiinta Xisbiga Kulmiye ee heer Degmo iyo heer Gobol. Iyo Xildhi baanada ka soo baxay Xisbiga Kulmiye marka laga reebo Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Wakiilada C/casiis Maxamed Samaale oo isagu Gaadhigiisu ka soo qaaday Magaalada Jig-jiga ee Xarunta Ismaamulka Somalida Itoobiya. Arrintan ka soo qayb gal la’aanta Masuuliy iinta sar-sare ee Xisbiga ayaa Dadwaynuhu Calaamatu su’aal dul dhigeen. Taasi oo jawaab dh ab ah aanay u haynin lana fili doono in dhawaan ay soo bixi doonto xaqiiqda jirtaa.
Caydarus Axmed Ismaaciil Qadiye
Previous PostDaahir Rayaale Kaahin Oo Xilkii Olalaha Doorashad Ka Wareejiyay Cismaan HindiNext PostTaliyihii Booliska Dila oo loo xidhay inuu is-hortaagi waayay taageerayaal KULMIYE u soo baxay	Blog